Loogu talagalay in lagu muujiyo Wax ka baxsan Caadiga | Martech Zone
Loogu talagalay in lagu muujiyo Wax ka baxsan Caadiga
Tuesday, April 13, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Carruurtaydu waxay had iyo jeer igu majaajiloodaan jacaylka aan u qabo filimada fir-fircoon ee aan si fudud u heli karin. Markii aan daawanayay Madagascar 2, waxaan jeclaa goobtan uu iftiinka cas ka bilaabayo shid iyo shid… daawo sida ay u maamulaan penguins-ka ee giraanta:
Aad bay u xun tahay in falanqayntu aysan had iyo jeer lahayn nalal cas oo biligleynaya "loogu talagalay in lagu muujiyo wax aan caadiga ahayn" iyo sidoo kale buug-gacmeedyada sida loo hagaajiyo. Dabcan - xitaa haddii ay yeeleen - ilaa iyo inta ay diyaaraddu weli duulayso, waxay u badan tahay inay doortaan inayan waxba samayn.
Ururada sidoo kale waxay ku milmeen tirooyinka sii kordhaya (sida aniga oo kale ah!). Dhibaatadu waxay tahay in ay jiraan sheekooyin caadi ah oo ku jira tirooyinka kuwaas oo ah inay biligleeyaan nalalka cas. Waa shaqadaada suuqgeyn ahaan inaad hesho… laga yaabee hoos u dhac weyn oo ku yimid taraafikada ereyga muhiimka ah, ama goobta tixraaca oo ka soo baxda meel aan jirin.
Waxa ugu dhow ee aan ka helno buug-gacmeedka ayaa ah talada socota ee dadka sida Avinash Kaushik iyo falanqaynta hababka ugu fiican baloogyada. Waa maxay nooca nalalka cas ee aad ku soo shaac baxday (ama aad iska indhatirtay) falanqayntaada?
Waxaa laga yaabaa inaad wax ka qabato ka hor inta aysan diyaaraddu dhicin! Mise waxaad ka heshaa Warbixinnadaada Falanqaynta "kuwo quruxsan oo xoogaa hypnotic" ah?
Tags: AnalyticsMadagascarbadhanka cas
Sababta iyo Sida Loo Diiwaangaliyo loona Helo Lambarka DUNS